Welcome to Aayaha Nolosha » GUURKA SOOMAALIDA IYO AJAANIIBTU MA AH MID DHAWAAN BILOWDEY.
GUURKA SOOMAALIDA IYO AJAANIIBTU MA AH MID DHAWAAN BILOWDEY.
May 1, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Maalmahan warbaahinta kala duwan iyo baraha bulshada waxaa aad looga hadal hayey gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo guursadey dad ajaaniib ah.
Iyada oo ay taasi jiro ayaa sheekooyin aan helaynana ay cadeynayaan in guurka noocan ah uu soo bilowdey xili hore oo uusan hadda kow aheyn
waxa uuna bilowdey wakhti hore sida ay nooga Sheekaysay Maamo Soomaaliyeed oo goob joog u aheyd.
Maryan Cabdi oo ah ayeeyo Caruurteedii caruuro dhaleen ayaa iiga warantey Qiso Jaceyl oo dhexmartey saaxiibteed ay naftu u dhaxeysay oo lagu magacaabi jirey Shugri Qalanjo iyo Injineer u dhashay dalka Ingiriiska oo ay kawada shaqenayeen Warshadihii ku yaaley dalka mid kamid ah.
Maamo Maryan waxa ay sheegtay in Shugri iyo Injineerku uu dhexmarey Jaceyl baaxad weyn oo ay nafta isu huri kareen iyada oo Sanadka ku sheegtay in uu ahaa 1970kii.
Injineerka oo lagu magacaabi jirey Heneri ayaa waxa uu Shugri ka dalbadey guur balse waxa ay ka codsatey in uu Aabheed ka doonto sida dhaqanka Soomaalidu ahaa.
Henari waxa uu u tagey Odeygii waana ay heshiiyeen markii uu ogolaadey in Tawxiidka loo qabto oo uu Islaamo waxa uuna ku meheriyey gabadhiisii Shugri.
Dhowr bilood ka dib Shugri iyo ninkeedii waxa ay isu raaceen dalka Sucuudiga si ay usoo cimreystaan.
Maamo Maryan waxa ay sheegtay in lix bilood kadib ay ka soo noqdeen Sucuudiga oo ay muddo ku soo nasteen Cimradii kadib.
Shugri Qalanjo Arooska loo sameeyey waxa uu ahaa mid aad u heer sareeyey alaabta ay ku aqal gasheyna Markab ayaa dibada looga keenay.
Maryan waxa ay intaa ku dartey in Shugri ay aheyd gabdhaha aadka u Jecel Daawashada riwaayadaha iyo filimada waxayna tiri.
” Arintii iigu yaabka badneyd waxay aheyd markii ninkii darteed u muslimey Shugri ay dhowr jeer isugu dhaceen in ay salaada wakhtigeeda tukato oo aysan dib u dhigin iskana dayso heesaha iyo Muusiga oo mar walba ay dhageysan jirtey.
Waxaana goob joog u ahaa oo aan xaliney aniga iyo Aabaheed buuq ka dhashay Shugri oo ka codsatey in uu u wado ninkeeda Riwaayad ka socotey golaha Murtida iyo Madadaalada.. isaguna waxa uu ugu jawaabey ” diinteenu ma ogola heesaha iyo Riwaayada oo waa danbi ee iska dhaaf”
Waxa uuna ku eedeeyey in marka uu wax walba oo xun uu ka celiyo ay ugu jawaabi jirtey . “ma adiga oo shaley Muslin noqdey ayaa wax noo sheegi inteen Muslin ahaa..fac kafac ayaan islaam ahay ee kaaley i raac oo ii wad Riwaayada.
Waxa uu marar badan Aabaheed ka codsadey in uu u sheego gabadhiisa in aan Muslinimada ahaansho aheyn ee ay tahay wax qalbiga iyo quluubta qofka ku abuuran oo xumaha ka reebaya.
Maryan waxa ay intaa sii daba dhigtey in Shugri iyo ninkii ay guursatey ee Ingiriiska ahaa 1984-tii ay u guureen dalka Ingiriiska gaar ahaan London, iyada oo xustey in ay ugu war dambeysay 1997-dii caruurtii ay u dhashayna ay dad waaweyn ahaayeen.
Waxa ayna ku soo gaabisey warkeedii in ay jireen gabdho kale oo badan oo waayadaa guursadey rag Ajnabi ah oo u badnaa Talyaani iyo Ingiriis sidoo kalena ay jireen rag Soomaali ah oo gabdho Ajnabi ah guursadey.
W/Diyaariyey: Mohamed Faarah Duurgal.